EPL: Kooxda Liverpool oo soo degtay kaalinta saddexaad ee horyaalka kaddib guul ay ka soo gaatay West Brom… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Kooxda Liverpool oo soo degtay kaalinta saddexaad ee horyaalka kaddib guul ay ka soo gaatay West Brom… + SAWIRRO
Haaruun Yuusuf April 16, 2017
(West Brom) 16 Abriil 2017. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guul 1-0 ka soo gaartay West Bromwich Albion oo ay booqatay kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa goolka hore la timid dhammaadkii qeybtii hore ee ciyaarta gaar ahaan intii lagu guda jiray halkii daqiiqo ee lagu kordhiyey ciyaarta, waxaana laad xor ah oo uu soo qaaday Milner madax ku gudbiyey Lucas Leiva, waxaana markaa kaddib madax kale ku dhaliyey laacibka reer Brazil ee Roberto Firmino, kulanka ayaana lagu kala nastay 1-0 lagu hoggaaminayey West Brom.
Qeybtii labaad markii dib la isugu soo laabtay labada kooxood ayaa isku helay fursado goolal loo filan karay laakiin waa ay ku guuldarreysteen inay gool dhaliyaan qeybta labaad ee ciyaarta, waxaana kulanku uu ku soo dhammaaday 1-0 ay ku badisay Reds.
Kooxda Liverpool ayaa sidaas ku soo degtay kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League iyadoo leh 66-dhibcood, kaddib 33 kulan oo ay ciyaartay, iyadoo Man City ay soo dhacday kaalinta afaraad.
QORMO XIISO LEH: Maxaa dhici lahaa haddii uu Pogba ku biiri lahaa Chelsea, Kante-na Man United?
Waa maxay sababta keydka loo dhigay Zlatan Ibrahimovic kulanka iminka u dhexeeya Man United iyo Chelsea?